Taliska Booliska oo soo saaray digniin ka dhan ah Propagaanda-da Imtixaanaadka Sanad Dugsiyeedka 2019/2020 – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Taliska Booliska oo soo saaray digniin ka dhan ah Propagaanda-da Imtixaanaadka Sanad Dugsiyeedka 2019/2020
Muqdisho (SONNA)- Taliska ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa soo saaray digniin ka dhan ah Propagaanda-da Imtixaanaadka Sanad Dugsiyeedka 2019/2020, kaas dalka ka bilaabandoona 18-July-2020.
Sida ay sheegtay Wasaarada Waxbarashada Hidaha iyo Tacliinta Sarre, waxaa sanadkaan Imtixaanaadka Sanad dugsiyeedka 2019/2020 ufadhiisandoona in ka badan 70,000 oo arday Soomaaliyeed ah si xariir ah sanadkii 6-aad, iyadoo sanadkaan lagu Soo kordhiyay fasalka 8-aad (Standard8) 11/July/2020 & Dugsi sare 18-July-2020.
Taliska Ciidanka Boliiska Soomaaliyeed, ayaa sheegay inay diyaariyeen 2000 oo xubnood oo isugu jira Saraakiil iyo Askar sugta Amniga goobaha imtixaanada, Ilaalinta geedi socodka imtixaanada iyo daabulaada imtixaanka.
" Hadaba, iyadoo aad looga taxadaray #Badqabka imtixaanaadka sanadkaan, ayaa waxaa jiri kara #Propaganda iyo Qalqal lagu abuuro Waalidiinta iyo Ardayda Soomaaliyeed. Sidaas daraadeed, waxaan #Digniin adag gaarsiinaynaa qof walba oo isku daya in uu abuuro qalqal Imtixaan, iyadoo Hadaba aan qaarkood gacanta ku hayno" ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Booliska.
Fadlan, wixii aad u’aragtaan falalkaas gaarsiiya Ciidanka Boliiska oo howshaas gacanta ku haya, idinka oo Maraya Number-ka 991 ama Baraha Bulshada.